uNtips ucela iivoti zenu | News24
uNtips ucela iivoti zenu
Umphathi wesikhululo iRadio Zibonele uNtibeleng Shete uchongwe njengomnye wabagqatswa abazakukhuphisana ngesikhundla sokusasaza iinkqubo zomculo wesintu kwijelo losasazo .likazwelonke uMhlobo Wenene.
IRadio Zibonele iyaqhuba nokuzenzela igama ezizweni ngompondozihlanjiwe balo kwezosasazo.
Yimincili nemivuyo yodwa nanjengoko umphathi sikhululo, unkosazana Ntebaleng Shete ethe wachongwa njengomnye wabagqatswa abathandadathu.
Aba bazaku khuphisana ngesikhundla sokusasaza iinkqubo zomculo wesintu kwijelo losasazo likazwelonke uMhlobo Wenene phantsi kwe SABC.
Oku kulandela ikhwelo elihlatywe ngu Mhlobo Wenene lokukhangela umsasazi ozakuthi aqhube inkqubo ebezifudula zisasazwa ngongasekhoyo u Saba Mbixane noye wasutywa kukufa kwinyanga ka February kulonyaka ka 2015.
Sithethanje u Shete nobizwa njengo Ntips ngoogxa bakhe, uzakuqalisa ukusasaza inkqubo egama lingu Siwela Ithukela ngo Lwesine umhla wamashumi amathathu(Namhlanje) ku April ka 2015 phakathi kwentsimbi yeshumi ngokuhlwa nentsimbi yeshumi elinesibini ekuzeni kusa.
Lo ka Shete uzakulandela ngenkqubo eyintandokazi kubathandi bomculo ka maskhandi,
u“Lavuth’iBhayi” ngoMgqibelo umhla wesibini ku May, ukuqala ngentsimbi yeshumi ekuseni, ukuya kweyokuqala emva kwemini.
UShete, novakalise uchulumanco ngokuchongwa kwakhe njengomgqatswa uzakuziqhubela ezi nkqubo kumagumbi osasazo eSABC eSea Point kuledolophu yase Kapa ezinkqubo zimbini.
Kungokunje ijelo losasazo i Radio Zibonele libongoza abaphulaphuli kunye nabathandi balo ukuba bamxhase lo ka Shete ngokuthi bamvotele kwinkcukacha ezizakuthi zipapashwe kungentsuku zatywala.
UNtips kungoku nje uqhuba inkqubo ethi “Ezakuthi Iingoma”
Ngo Lwezihlanu ukusuka kwicala emva kwentsimbi yesixhenxe ukuya kweyeshumi ngokuhlwa eRadio Zibonele.
Okwangoku ungathi ubonakalise inkxaso yakho ngokuthi undwendwele ikhasi lakhe lika facebook ku “Ntebaleng Ntips Shete”.
Votela ingqaka kumculo wesiNtu,”
Khona ukuze ukwazi uhlala ufumana ulwazi ngokuqhubekayo kolukhuphiswano